ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्‍न : तपाईंको राजीनामा कसले माग्यो? - Sidha News
ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्‍न : तपाईंको राजीनामा कसले माग्यो?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको भेटवार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सहमति जुटाउने प्रयास फेरि असफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबारको अभिव्यक्ति र प्रदेश १ का आफूनिकट नेताहरूसँगको भर्चुअल छलफलले नेकपाको विवाद थप चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका थिए।
‘तपाईंलाई अहिलेको कसले राजीनामा मागेको छ। पार्टीभित्रको विवाद हामी सहमतिमा मिलाउन चाहान्छौँ। तर, तपाईंबाट पार्टीभित्रको विवाद बढाउने काम भइरहेका छन’, अध्यक्ष दाहालको भनाइलाई उदृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘तपाईं आफैं समस्या झिक्ने अनि आफूनिकट नेतासँग छलफल पनि अघि बढाउनुहुन्छ।’
आन्तरिक कलहका कारण अध्यक्ष प्रचण्डसँग दूरी बढिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राजीनामा नदिने बताएका थिए। पटक पटकको कलहका कारण नेकपा अहिले विभाजनकै डिलमा पुगिसकेको अवस्थामा छ।
‘अहिले जतिले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरू देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न चाहनेहरू हुन्, उनीहरूलाई त्यस्तै आदत छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सिंहदरबारमा भनेका थिए, ‘बाहिर के तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन। त्यसबारे मलाई थाहा छैन। बाहिरी हल्ला हल्लामै सीमित हुन्छन्, हुनेवाला केही छैन।’